Android Lollipop 5.1.1 သည် Xperia Z range | Androidsis
Manuel Ramirez | | NOTICIAS, Sony က, Android တက်ဘလက်များ, Android ဗားရှင်း
အံ့သြစရာကောင်းတာကအချို့သောဆိုနီဆိပ်ကမ်းများကဆိုလိုသည် နောက်ဆုံးသတင်းများကိုလက်ခံရရှိရန်ဆက်လက်နိုင်ပါတယ် Android Lollipop ကိုစတင်မိတ်ဆက်ပြီးနောက်နှစ်နှစ်ခွဲနီးပါးကုန်လွန်သွားသောအခါ Sony သည် Android Lollipop 5.1.1 ကို၎င်း၏ Xperia Z အကွာအဝေးရှိအဟောင်းဆိပ်ကမ်းများတွင်စတင်အသုံးပြုခဲ့သည်။
အတိအကျ Xperia Z, Xperia ZL, Xperia ZR နှင့် Xperia Tablet Z တို့သည်ဤအသစ် update ကိုလက်ခံရရှိရန်အတွက် Android Lollipop 5.1.1 သို့စွမ်းဆောင်ချက်အသစ်များပါဝင်သည်။ အသံအတိုးအကျယ်ထိန်းချုပ်မှုတိုးတက်မှု နှင့်အသံတိတ် mode၊ LinkedIn နှင့်အသစ်ပေါင်းစည်းခြင်းနှင့် terminal ၏ယေဘုယျအပြုအမူ၏တည်ငြိမ်မှုနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်မှုသည်အဘယ်အရာဖြစ်သည်။
1 အဆိုပါ Z1 အကွာအဝေးမီ
အဆိုပါ Z1 အကွာအဝေးမီ
Android Lollipop 5.1.1 သည် OTA ပုံစံရှိ Xperia Z, Xperia ZL, Xperia ZR နှင့် Xperia Tablet Z ဖုန်းအချို့ကိုသုံးစွဲသူများထံရောက်ရှိနေပြီဖြစ်သည်။ လမ်းကိုဂျပန်ထုတ်လုပ်သူ သူကသူ့ဖောက်သည်တွေနဲ့ပြုမူနေသည်ဒီဗားရှင်းကိုနှစ်နှစ်ခွဲကြာတဲ့ဆိပ်ကမ်းတခုခုမှာအသုံးပြုနိုင်တယ်ဆိုတာနားလည်ထားလို့ဖြစ်တယ်။
အဆိုပါအသစ်အဆန်းတ ဦး တည်းအဘို့အသွားပါ LinkedIn မှသစ်ကိုပေါင်းစည်းမှု ပို၍ အလိုလိုသိသောပြက္ခဒိန်ထပ်တူပြုခြင်းနည်းလမ်း၊ သတိပေးချက်များ၊ အသံတိတ် mode နှင့် volume ကိုထိန်းချုပ်ခြင်းနှင့်ယေဘုယျစည်းမျဉ်းများအရတိုးတက်လာသောစွမ်းဆောင်နိုင်မှုတို့နှင့်အတူ။
အဘယ်အရာကိုမျှဘက်ထရီအကြောင်းကိုပြောပေမယ့် ဒါကမသန်မစွမ်းဖြစ်ခဲ့တယ် ယခင်နှင့်အတူ Android Lollipop 5.0.2 များစွာသောအသုံးပြုသူများက၏ကြာချိန်ကိုလျှော့ချတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
Xperia Z ကိုအဆင့်မြှင့်ပြီးနောက်ဤသတင်းများကိုလက်ခံရရှိပြီးနောက်၎င်းသည် "အက်ပလီကေးရှင်းအားလုံးကိုပိတ်ပါ" အကွက်မှဖြတ်သွားသည့်မကြာသေးမီကအက်ပလီကေးရှင်းများအတွက်တွေ့ရှိရသောဖြေရှင်းနည်းကဲ့သို့အသေးစိတ်အချက်အလက်အချို့လည်းရှိသည်။ ၎င်းကိုအစားထိုးသည့်အိုင်ကွန်တစ်ခုသို့ အဲဒါမကြောင်ဘူး
အခုaအသံချိန်ညှိချက်များကိုထိန်းချုပ်ရန်အိုင်ကွန် မာလ်တီမီဒီယာ, နှိုးစက်နှင့်ဖုန်းမြည်သံဖြစ်သကဲ့သို့။ အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုသည်အသံတိတ်စနစ်ဖြင့်ဖြစ်ပြီး၎င်းသည် cogwheel မှ၎င်း၏ parameters များအားလုံးကိုကြည့်ရှုရန်ချွင်းချက်များကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင် configure လုပ်နိုင်သည်။
ကြည့်ရတာကျန်နေတာတစ်ခုက ဘယ်လိုဘက်ထရီပြုမူ, ဒါပေမယ့်ရက်အနည်းငယ်၏ကျမ်းပိုဒ်သည်အထိဒီအတည်ပြုရန်ခက်ခဲသည်။ တွေ့မြင်နိုင်သည်မှာဖုန်း၏စွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်ခြင်း၊ အသုံးပြုသူအများအပြားမှသတင်းပို့ပြီးသောအရာများဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာအသုံးပြုသူအဆင့်တိုင်းတွင်အရည်အသွေးမြင့်မားသောအတွေ့အကြုံဖြစ်သည်။
ဒီအံ့သြစရာကောင်းတဲ့အံ့သြစရာကောင်းတဲ့ဖုန်းစီးရီးတွေထဲမှာအနည်းဆုံး Xperia Z, Android 6.0 Marshmallow ကိုလက်ခံရရှိမယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ဒီ update ကိုဒီအတိုင်း OTA တစ်ခုအဖြစ်မမြင်မချင်းကောလဟလအဖြစ်ထားသွားမှာပါ။ Sony နှင့်ကျေးဇူးတင်ရန်နောက်ထပ်နေ့ သင်၏သုံးစွဲသူများအားထောက်ပံ့ပေးသည့်နည်းလမ်းဖြင့်သင့်အားဂုဏ်ပြုပါသည်။ များစွာသောသူတို့ကသူတို့အစားထိုးချင်သည့်အချိန်တွင်အခြား Sony ကိုဆုံးဖြတ်ရန်သေချာစေရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » Sony က » Sony က Xperia Z, Xperia ZL, Xperia ZR နှင့် Xperia Tablet Z အတွက် Android Lollipop 5.1.1 OTA ကိုထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။
OS အသစ်ထွက်ပေါ်လာရန်အတွက် android ဖုန်းတစ်လုံးအနေဖြင့်တောင်းပန်ရန်အလွန်ခက်သည်၊ ကျွန်ုပ်သည်စနစ်တစ်ခုတည်းဖြင့် ၂ နှစ်ကြာနေထိုင်ခဲ့ပြီးနောက်ယခု Samsung သည် New M အတွက်အထောက်အပံ့မရှိတော့သော blowjob နှင့်အတူထွက်လာသည်။ သူတို့ကတ ဦး တည်းကိုဖုန်းအသစ်တွေဆက်ပြီးဝယ်ယူခိုင်းတယ်
ကောင်းမွန်စွာပြုမူသောထုတ်လုပ်သူများရှိသည်။ အကယ်၍ မရရှိလျှင်၊ သင်သည်အနည်းဆုံး ၂ နှစ်တာကာလအတွင်း updates အားလုံးကိုလက်ခံရန် Nexus ကိုအမြဲရွေးချယ်နိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်သည်ကော့စတာရီကာမှဆင်းသက်လာပြီးကျွန်ုပ်တွင် Xperia Z (C6603) ဖြန့်ချိခဲ့သော်လည်းကျွန်ုပ်၏ဖုန်းသည်ဗားရှင်း 4.4.4 နှင့်အတူရှိနေသေးသည်။
OTA မှတဆင့်သို့မဟုတ်လျှောက်လွှာမှတဆင့်ကျွန်ုပ်မှအသစ်တင်ခြင်းမှမည်သည့်အရာမျှမရရှိခဲ့ပါ။ ကျွန်ုပ်သည်အပိုဆောင်းတစ်ခုခုလုပ်ရန်လိုအပ်ပါသလား။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်ကော့စတာရီကာမှဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်၏ Xperia Z သည် Android 5.0 ဖြင့်ထူးကဲကောင်းမွန်ပြီး 5.1.1 ဖြင့်မည်သို့လုပ်ဆောင်သည်ကို Sony သိလိုပါသည်။ အကယ်၍ Sony က Android 6.0 သို့အဆင့်မြှင့်ပါကသူတို့သည်ကျွန်ုပ်၏ပါးစပ်ကိုဖွင့ ်၍ ပိုပိုများပြားလာသည်။ ကျွန်ုပ်၏ Xperia Z ကိုနှစ်သက်သည်မှာကျွန်ုပ်၏ Xperia Z ကို ၀ ယ်ရန်အူမကြီးတိုင်းတွင်တန်ဖိုးရှိသည်။
မင်္ဂလာပါ KEVGEAR2005 …ဆဲလ်ဖုန်းကိုအဆင့်မြှင့်တင်ရန်သင်အထူးပြုလုပ်ခဲ့ပါသလား။ သတ္တုတွင်းသည်မည်သည့်ပံ့ပိုးသူမှ (ICE၊ Claro စသည်ဖြင့်) ပိုင်ဆိုင်သည်မဟုတ်သော်လည်းကျွန်ုပ်သည် OTA (သို့) အဖော်အက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုခုမျှမရရှိခဲ့ပါ။ Pura vida ။
။ ။ ဟုသူကပြောသည်
အဆင့်မြှင့်တင်မှုများသည်အလွန်ကောင်းသော်လည်း sonn's android 5.1.1 တွင် slide-out status bar တွင်ရွေးချယ်စရာအနည်းငယ်သာကျန်ရှိနေသည်ကိုကျွန်ုပ်အနှောင့်အယှက်ပေးသည်။
Frank's Juarez ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်တွင် -T-Mobile မှမူလ Xperia Z C6606 ရှိပြီး ၄.၃ မှ ၅.၀.၁ မှ (FT မှတဆင့်) အဆင့်မြှင့်တင်ပြီးယနေ့တွင် C4.3 အဖြစ်ဆက်လက်တည်ရှိသည်။ လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်က Android 5.0.1 သို့အဆင့်မြှင့်ခြင်းကိုသတိပြုမိသော်လည်း၊ အချိန် UPDATE ကငါ့ကိုအမှားတစ်ခုပေးသည်။ ဘာကြောင့်လဲ .. သင်သိသလား? ငါ FT မှတဆင့်တူညီသောလုပ်ငန်းစဉ်ကိုလုပ်ဖို့ရှိသည်လိမ့်မည်နည်း?
Frank's Juarez ကိုပြန်သွားပါ
marcelo martinez ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်တွင် xperia z1 ရှိပြီးကျွန်ုပ်သည် Android 5.1.1 lollipop ရှိပြီးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အားကူညီမည်ဟုကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ကြောင်းတစ်စုံတစ်ယောက်သိပါက၎င်းကိုအမြစ်တွယ်အောင်ကျွန်ုပ်ရှာမတွေ့ပါကကျွန်ုပ်တန်ဖိုးထားလိမ့်မည်။
marcelo martinez အားပြန်ပြောပါ